Ihe omume ọdịnihu na nchịkọta nke izu site n’aka Jucelino Luz – JucelinoLuz
Ntughari nke akwụkwọ ozi dị n’okpuru zigara onye minista gburugburu Japan na ndị ọchịchị ndị ọzọ:
Águas de Lindóia, Febụwarị 17, 2020
M ji nkwanye ugwu abịa, ka m wetere gị ozi dị mkpa gbasara ohere nke nje ọhụrụ abụọ, ọ dị nwute na otu n’ime ha ga -amalite na Spain na Serbia, yabụ a na m arịọ maka nlebara anya na nyocha gị iji zere nnukwu nsogbu a n’etiti 2025 na 2026, na ịdị umeala n’obi na achọghị ọdịmma onwe onye naanị na ịjụ onye ọ bụla chọrọ na -emeri naanị ihe nke ụwa; ịnọpụ na ndị mpako na ndị nwere oke ọchịchọ. N’ime akwụkwọ ozi ezigara China na 2008, agwara m gị banyere nje Covid19. (Ha ga -eji ya tinye ọgwụ mgbochi nnwale n’ụwa niile nke na -agaghị arụ ọrụ nke ọma ma bute ọnwụ karịa nje nke ya) .na gbasara Japan & Ụwa.
Ozi ime mmụọ (ịhịa aka dị nsọ):
Nje Marburg ga -apụtakwa na Spain – Madrid na Serbia n’agbata afọ 2025 na 2026, ọ nwere ike bụrụ ọrịa na -efe efe – ọ bụrụ na emeghị ihe ọ bụla. Ihe ịrịba ama nke mbụ ga -adị na Afrịka n’afọ 2021. Anyị ga -enwekwa nje Nipah nke dị n’agbata afọ 2027 na 2029, nke ga -enye ụfọdụ akara tupu, mana ọ ga -adị oke egwu ma nwee ike bụrụ ọrịa na -efe efe n’ụwa …;
Ọdachi nwere ike ịdaba na obere ụgbọelu n’ime ụlọ elu dị okpukpu abụọ na mpụga Milan ga-egbu mmadụ asatọ na Ọktoba 3, 2021, onye ọkwọ ụgbọ elu ahụ ga-egbu ọkụ n’ihi mmetụta nke ọgwụ mgbochi, ụgbọ elu ahụ ga kwụsị ịchịkwa ma daba n’ime ụlọ. Ha ga -asị na ọ bụ nsogbu igwe (nke sistemụ ụgbọ elu). Nke a ga -abụ nke mbụ n’ihe mberede ụgbọelu n’ihi ọrịa mberede ka emechara ịgba ọgwụ mgbochi nnwale. A ga -enwe ndị Ịtali n’etiti ndị ahụ metụtara. Onye na-anya ụgbọelu nwere ike bụrụ otu n’ime ndị kacha baa ọgaranya na Romania Agaghị enwe ụzọ mgbapụ maka ndị na-anya ụgbọ elu abụọ na ndị njem isii nọ n’ụgbọ nnukwu ụgbọ elu otu ụgbọ elu Pilatus PC-12 / 47E-nke edebanyere aha YR-PDV: n’etiti ha nwekwara nwa. Ezinaụlọ ndị Romania, ndị France na ndị Italiantali na -apụ na Linate gaa Olbia, na -eji ọrụ aerotaxi nke ụlọ ọrụ Romania nke na -arụkarị ọrụ na Italy. Citizensmụ amaala Itali abụọ ga -anwụ n’ihe mberede ụgbọ elu na San Donato, na mpụga Milan. Ha nwere ike ịbụ Filippo Nascimbene, onye Pavia, na nwa ya nwoke dị otu afọ Rafael. Nwunye ya Claire Alexandrescou, nwa amaala France, na nne nwunye ya Miruna Anca Wanda Lozinschi, nwa amaala France. Ọnwụ nke onye nrụpụta ala na Rom bụ Dan Petrescu, nwunye ya Righina, nwa ya nwoke Dan Stefan Petrescu, nwere ụmụ amaala Romania na German, yana Julien Brossard, nwa amaala Canada na enyi nwa ya nwoke, ga -abụkwa nkwenye.
A ga -enwe ihe karịrị ajọ ifufe 23 na Eshia, a na -atụkwa anya na Tropical Cyclone ga -abụ ajọ ifufe nke 17, na -aga China site na Ọktoba 08, 2021, ma eleghị anya ọ ga -aga n’ebe ugwu na Oké Osimiri South China wee banye n’ebe ọdịda anyanwụ. Ọ nwekwara ike gbasaa site na Ọktoba 17, 2021, na -eti ụfọdụ mba Eshia ihe;
Onye ọkwọ ụgbọ elu nwere ike ịnwụ n’ihi ihe mberede helikọpta n’ihi ọrịa mberede, helikọpta ahụ ga -ada na mpaghara dị nso n’ugbo Imaizumi na ọdụ ụgbọ oloko, na Ọktoba 7, 2021, ụgbọ elu ahụ ga -apụ na heliport n’obodo Oi ( Kanagawa),, na -aga obodo Kisarazu (Chiba), onye na -anya ụgbọelu ga -enwe ọrịa mberede, mmetụta nke ọgwụ mgbochi Covid19 kpatara .;
A ga-ahọpụta onye isi oche nke PLD-Liberal Democratic Party, Fumio Kishida ka ọ bụrụ Prime Minista nke 100 nke Japan n’ihi ntuli aka emere na Ọktoba 4, 2021. Na Prime Minista Yoshihide Suga onye a ga -ahọpụta na Septemba 16, 2020, na 2021 ga -agba arụkwaghịm ma jiri Fumio Kishida dochie ya na Ọktoba 2021 .;
N’October 6, 2021, ala ọma jijiji ga -eme n’ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Osumi Peninsula (Miyazaki), nke ịdị ukwuu 5.0. Ebe etiti ga -adị omimi 40km, a ga -enwekwa ala ọma jijiji nke ike seismic 4 na mpaghara Miyazaki na Kagoshima, n’ime obodo ndị a: Nichinan, Kushima, Soo, Kirishima, Shibushi, Osaki, Kinko, Minamiosumi na Kimotsuki. N’obodo ndị ọzọ na ógbè abụọ ahụ na ndị ọzọ na Kyushu ọma jijiji ga -adị obere;
Ala ọma jijiji siri ike 6.0 wakporo mpaghara Tokyo; n’akụkụ Saitama, na -elekwasị anya na mpaghara Chiba, na omimi nke kilomita 80, ọrụ nke ụfọdụ ụgbọ oloko, gụnyere ọrụ ụgbọ oloko nke Tokyo Metro na shinkansen na -arụ, ga -akwụsịtụ mgbe ala ọma jijiji ahụ gasịrị. A ga -enwe obere akụkọ ihe mere eme na ụlọ ọrụ nuklia Japan 2 dị na Ibaraki Prefecture nke a na -agaghị ahụ. Ala ọma jijiji ahụ ga -ebute mgbanyụ ọkụ nke ga -emetụta ihe dị ka ụlọ 260 dị n’isi obodo Japan .;
Ala ọma jijiji 9.0 ga -adakwasị mpaghara dị nso na ọwa Kochi, (ma ọ bụ na nke ọ bụla n’ime ebe ndị a tupu), nke nwere ike ịbụ na: Nemuro (Hokkaido), Chiba na Yokohama (Kanagawa); Ala ọma jijiji ahụ ga -eme ka ebili mmiri na -emetụta akụkụ nke Japan na (ruo) Nọvemba 16, 2022 .;
A ga -ahụ ụmụaka abụọ n’akụkụ ozu nne ha adịghị ndụ – A. M. -n Septemba 29, 2021, n’ụlọ ha na -echeghị ozu nne ha, n’ime ụlọ na Les Sablons, Le Mans – na Sablons na Le Mans. Ahụ nke nwanyị M. n’ime ụlọ ya, site na ọnwụ mberede n’ihi ọgwụ mgbochi Covid19, ga-enwe nkụchi obi, ụmụaka na-agụ akwụkwọ na Claude-Bernard crèche na Le Mans, na nke ọzọ n’ụlọ akwụkwọ praịmarị Gérard. -Philipe, ụmụ agbọghọ abụọ ahụ agaghị anọ ọtụtụ ụbọchị wee chee na nne ha na -arahụ ụra. Ọnwụ nwanyị a ga -eme na Septemba 25, 2021 – Nne, amụrụ na Côte d’Ivoire, na 1990, na -enwe nsogbu ahụike yana ọ ga -anwụ site na mmetụta ọgwụ mgbochi .;
Nne Maferein ga -ahapụ ụmụ ya abụọ, Amaya na Yaguine, naanị n’ụlọ ka ha gaa ahịa ọgwụ. Ha abụọ nwere ike ịnwụ n’ihi oke ọkụ nke ga-amalite n’ụlọ ha na ala mbụ nke ụlọ elu na Laeken-France. Nne Maferein (ga -ahapụ ha naanị ka ha zụta ọgwụ ọrịa shuga n’ụlọ ahịa ọgwụ dị nso na Mee 5, 2021) .;
N’October 6, 2021, na Gifu-Japan, a ga-ejide onye na-eme ihe nkiri Japan bụ Higurashi 日暮 明 容 疑 者, nke bi na Adachi-ku, Tokyo, na-enyo enyo na ọ dara iwu ịgba akwụna ụmụaka na mmachibido iwu ndị na-akpali agụụ mmekọahụ. Na 2019 onye na-eme ihe nkiri Higurashi gaara ewere ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị afọ 14 na ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị afọ 17, n’oge ahụ, na họtel dị na mpaghara Okayama na Nagano. Ọ kọrọ na o dekọrọ vidiyo ụmụaka na ụmụaka ma na -enyo enyo na -akpali agụụ mmekọahụ ụmụaka .;
Ala ọma jijiji ga -eti Pakistan na Oct.7.2021, ihe karịrị ụlọ 100 ga -ada wee hapụ ezinụlọ enweghị ebe obibi. Ala ọma jijiji nke mbụ ga -abụ nke 5.0 n’ogologo na ebe etiti ahụ bụ naanị kilomita 20 dị omimi – na -eso ala ọma jijiji ọzọ na oke 4.0, mana na omimi 10 km. Ịbịaru nso n’ala nwere ike ịkpata mbibi karịa. Ebe ebe mkpatụ ahụ ga -adị nso n’obodo Quetta, na mpaghara Balochistan nke dị na ndịda. Obodo Harnai ga -abụ nke kacha sie ike.
Enwere m olile anya na m ga -emehie, mana ọ bụ ihe m hụrụ site na nrọ m (Amụma).
Onye nke gị ,
Prọfesọ Jucelino Nobrega da Luz -Ndị ozi nzipu 54 -Águas de Lindóia –S.P CEP: 13940-000 Brazil
Cov xwm txheej yav tom ntej thiab cov ntsiab lus ntawm lub lim tiam los ntawm Jucelino Luz